आफ्ना छोराछोरीलाई यौन शिक्षा कुन उमेरमा दिनुपर्छ ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home शिक्षा आफ्ना छोराछोरीलाई यौन शिक्षा कुन उमेरमा दिनुपर्छ ?
आफ्ना छोराछोरीलाई यौन शिक्षा कुन उमेरमा दिनुपर्छ ?
करुणाजी नमस्कार । म केही समययता तपाईंका प्रश्नोत्तर पढ्न थालेकी छु । सत्य कुरा भन्नुपर्दा यसअघि यौनसम्बन्धी समाचार पढे पनि ज्ञानमूलक सामग्री पढ्ने मौका भने तपाईंबाटै पाएकी हुँ । यसका लागि धन्यवाद दिँदै केही प्रश्न सोधेकी छु । आशा छ, उत्तर पाउनेछु ।
तपाईं नेपालीलाई यौन शिक्षाको कमी छ भन्ने गर्नुहुन्छ । तर यौन शिक्षा कसरी दिने भन्ने कुरा मेरो दिमागमा पस्दै पसेन । कारण विद्यालयमा यस्तो कुरा पढाउने कुरा भएन । घरमा त यस्तो शिक्षा कसरी सिकाउन सकिन्छ र ? यसकारण यौन शिक्षाका बारेमा राम्रोसँग बुझाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । कुन उमेरमा यस्तो शिक्षा दिँदा ठीक हुन्छ ।
विनिषाजी, नेपालीहरुमा यौन शिक्षा लिने उपयुक्त माध्यम छैन । अर्थात यो जीवनको गम्भीर कुरा हो र यसलाई सबैले बुझ्ने गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भए पनि सरकारी निकायले यसलाई महत्व दिएको छैन ।
स्केत स्राेतः गुगल
Previous articleहृदयघातले उमेर भन्दैन, यसरी गर्नुस मुटुको हिफाजत
Next articleशेखर र गगनको विन विन गठजोड, युवा मत शेखर प्यानललाई